कोभिड खोपः विश्वमा कुन देशका बालबालिकालाई कस्तो खोप दिइँदैछ ? - Globe Nepal
कोभिड खोपः विश्वमा कुन देशका बालबालिकालाई कस्तो खोप दिइँदैछ ?
ग्लोब नेपाल	मंगलबार, २९ भाद्र २०७८ गते ९:०२ मा प्रकाशित
एजेन्सी / न्युयोर्क, २९ भदौ । १८ वर्षमाथिका आफ्ना अधिकांश नागरिकलाई खोप लगाएका विभिन्न देशले बालबालिकालाइ पनि खोप अभियान सुरु गरिसकेका छन् । अमेरिकामा ६ महिनादेखि नै बालबालिकामा खोप लगाउन थालिएको थियो भने वेलायतले अब सुरु गर्दैछ । प्रम्ख स्वास्थ्य अधिकारीहरूको सल्लाहपछि बेलायतका १२ देखि १५ वर्षका बालबालिकाले फाइजरको एक डोज लगाउने भएका हुन् । खोप विकासमा नयाँ फड्को मारेको चीनले तीन वर्षदेखि १८ वर्ष समूहका व्यक्तिलाई लक्षित गरी खोप तयार गरेको छ ।